‘बुबा म आँखा देख्छु होला नि है ?’ | BeniOnline.com.np जिल्लाका ताजा अनलाइन समाचार
Home समाचार राष्ट्रिय समाचार ‘बुबा म आँखा देख्छु होला नि है ?’
‘बुबा म आँखा देख्छु होला नि है ?’
२०७६, १३ फाल्गुन मंगलवार ०९:५९
रिदम सिंह/ बझाङ बझाङको साईपाल गाउँपालिका वडा नम्बर ४ की पिउलीकुमारी रोकाया अहिले १४ बर्षमा टेकिन । उनी एक बर्षको हुँदा सम्म आँखा देख्थिन । दुई बर्ष पूरा हुन केही दिन बाँकी हुँदा उनी झाडापखालाले थला परिन ।नजिकै स्वास्थ्य चौकी समेत नभएको र घरको आर्थिक अवस्था समेत निकै नाजुक भएका कारण उनका अभिभावकले उनको उपचार गर्न सकेनन् । करिब २ महिना सम्म उनी थलापरिन् ।
उनका उभिभावकहरुले छोरी बाँच्दैन भन्दै आश समेत काटी सकेका थिए । धन्न जेनतेन उनी बाँचिन् । उनलाई राम्रो भयो तर पछि गएर आँखा देख्न नसक्ने भईन् । छोरी आँखा देख्न नसक्ने भएपछि कसैले रतन्धो लागेको र कसैले देवी देउता लागेर यस्तो भएको भन्दै कुराहरु काट्न थाले ।उनका परिवारका सदस्य पनि धामीझाँक्री तर्फ नै बढी लागे । त्यो उनको परिवारको बाध्यता थियो । घर छोडेर बाहिर निष्कन र छोरीको उपचार गराउनका लागि आर्थिक अवस्था समेत थिएन ।
गाँउले तथा छिमेकीको घरमा काम गरेर छोराछोरी र आफ्नो परिवारको पेट पाल्नु पर्ने बाध्यता उनको परिवारको थियो । जसका कारणले उनको उपचार गराउन सम्भव भएन र अहिले सम्म अन्धकारमय जीवन वितानु पर्यो पिउलीले ।
गाँउका दाजु भाई दिदी बहिनी र छिमेकीसंगै गाँउ बाहिरबाट जाने जति पनि मानिसहरु छन् उनीहरु सबैले छोरीको आँखाको उपचार गराए राम्रो हुने र छोरी देख्न सक्ने भन्दै सल्लाह दिदै आएका थिए ।
गाउँपालिका भै सकेपछि गाउँपालिकाले सहयोग गर्ने भन्दै गाँउपालिकाका अध्यक्ष राजेन्द्र बहादुर धामीले आश्वसन दिएपछि उनका बुबा गंगाराम रोकायाले छोरीको आँखाको उपचार गराउन कैलालीको गेटा आँखा अस्पतालमा लगे ।
गाउँपालिकाले २५ हजार सहयोग समेत गरेको रोकायाले बताए । सहयोग पछि पिउलीको दुबै आँखाको शल्यक्रिया २०७५ पुष महिनामा गरिएको हो । एक महिनापछि डाक्टरले फेरी चेकजाँच गर्न गेटा आँखा अस्पताल कैलालीमा अनिवार्य आउनु भनेको थियो ।
गाउँमा माघ महिनामा बाक्लो हिउपात भयो । आफुसंग टिकट काट्न समेत पैशा नभएका कारण छोरीलाई लिएर उपचार गर्न जान नसकेको पिउलीका पिता गंगारामले बताए । अहिले गाँउकै युवाहरु मिलेर सदरमुकाम चैनपुरमा चन्दा संकलन गर्दै आएका छन् ।
रोकायाले त्यही चन्दा संकलन गरेको रकममा आश गर्दै सोही रकम लिएर छोरीको उपचार गराउन जाने सोच बनाएको बताए । छोरीले बुबा म आँखा देख्छु होला नि है ? कस्तो छ बुबा बाहिरको संसार, अनि आमा,बुबा, दाजुभाई दिदी बहिनीको अनुहार कस्तो छ ? भनेर सोध्ने गरेका पनि गंगाराम बताउछन् ।
जस्को जबाफ गंगारामसंग छैन र उनी केही बोल्न पनि सकिरहेका छैनन् । उनले आफ्नो जमिन पाखो भएका कारण विक्री गर्न समेत नमिल्ने गुनासो समेत गरे । पिउलीको आँखाको उपचारका लागि भन्दै कसैले २ सय कसैले एक हजार कसैले ५ सय गर्दै ६० हजार जम्मा भएको चन्दा संकलन गर्न लागेका छिमेकी राम बहादुर बोहराले बताए ।
सबै भन्दा बढी गाँउपालिकाका अध्यक्ष राजेन्द्र बहादुर धामीले ब्यक्तिगत दश हजार सहयोग गर्नु भएको छ । संकलन भएको रकम पनि अभाव हुने भएका कारण छोरीको उपचारमा बाधा पुग्ने भन्दै गंगारामले सम्पूर्ण सहयोगी मनहरुलाई सहयोगको अपिल समेत गरेका छन् । Source: news24nepal.tv
Previous articleपार्टीभित्रै डेढ महिनादेखि दबाबमा ओली
Next articleछोरीमाथि जबर्जस्ती करणी गर्ने बाबुलाई जन्मकैद फैसला